ဟိုတယ်တွေကို လှည်.ပြီးဖေါက်ထွင်း ခဲ.တဲ.ဝိဇာ မိပြီတဲ. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဟိုတယ်တွေကို လှည်.ပြီးဖေါက်ထွင်း ခဲ.တဲ.ဝိဇာ မိပြီတဲ.
ဟိုတယ်တွေကို လှည်.ပြီးဖေါက်ထွင်း ခဲ.တဲ.ဝိဇာ မိပြီတဲ.
Posted by Knowledge Seeker on Jul 27, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
နေပြည်တော် ဟိုတယ် ၈ လုံး၊ ပုဂံ ဟိုတယ် ၁ လုံး ကို ဖေါက် ထွင်းခဲ. တဲ. တကိုယ်တော် ဖေါက်ထွင်း သမ္မား ကို မိပြီ တဲ.။ သူ က လပွတ္တာ ကဖြစ်ပြီး စစ်ပြေး၊ ရဲဘက်ပြေး ဖြစ် ပါသတဲ.။ သူ က တစ်ယောက်ထဲလှုပ်ရှား ပြီး ကတ်ကျေး တစ်ချောင်း ပဲလို ပါသတဲ.။ အဓိကကတော. သူဟာ အရမ်းရဲတင်း ပြီး လက်သွက်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် တဲ.။ သူကပြောရာ မှာ ဟိုတယ်တွေကို လှုပ် ရှား ရ တာ အရမ်း လွယ်ပါ တယ်တဲ.။ဟိုတယ်လုံခြုံရေးတွေဟာ အရမ်ပေါ.လျော.လွန်းပါတယ်တဲ.။ နေပြည်တော်မှာဆို ဟိုတယ် ၂ လုံးမှာပဲ ပြန် လာခဲ.ရဘူးပါတယ်တဲ.။ အခန်းသန်.ရှင်း ရေးသမားများ အခန်း ပြုတင်းပေါက် ကို သေချာစွာပြန်မပိတ်တာ ဟာ သူ. အတွက်အခွင်.အရေးပါပဲတဲ.။ ဘာမှ အိပ်မွေ.မချရပါဘူး တဲ.။ မှော်အောင်တယ်ဆိုတာများလား ဘဲ
စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ … ဟိုတယ်လိုနေရာမျိုးမှာ လုံခြုံရေးပေါ့လျော့တယ်ဆိုလျှင်တောင် စီစီတီဗွီကင်မရာတွေ ထောင့်တိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါလျှက် တကိုယ်တော်လှုပ်ရှားသူကို သတိမထားမိခဲ့ကြဘူးလားနော် ……… ။ အခုလို မိသွားပြီဆိုတော့လည်း …. ဟိုတယ်တွေနဲ့ တည်းတဲ့ ခရီးသည်တွေအတွက် စိတ်တော့အေးရတာပေါ့လေ …. ။
စောရနက္ခတ်နဲ့ ကြုံချိန်မှာ မွေးခဲ့လို့နေမှာ
စောရနက္ခတ်ကြုံရင် တန်းစီစောင့်စရာ မလိုဘူးတဲ့..။ မကြုံသူများ မှောင်ခိုဝယ်ဂျပေါ့ကွာ..။
မိတာ ဟုတ်လို့လား အကိုလေးရာ …
ကူညီပါရစေ အဖွဲ့ကြီးက ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်အုပ်နဲ့ဘယ်လို ဘာကြောင့်
ဆိုတာလေး များ သိခွင့်ရမလား …။
ကို Gypsy ရေ ဟုတ် ပါ တယ် တဲ.ဗျ ဒါပေမဲ. ရဲဘက်ပြေးအနေနဲ. မိပြီး မှ ပစ္စည်းတွေသိမ်း တော. ကျောက်စိမ်း လက်ကောက် တွေ.လို.မေးမှ ပုဂံသမ ဟိုတယ်က ယူတာ ဆို မှ ပေါ်ပါ သတဲ. ဗျို. စစ်ပြေး ရဲဘက်ပြေး ဝရမ်းပြေး ဖေါက်ထွင်းမှုစုံ လို.ပါ ဘဲ ကို ကြီး ကို ငယ် ဆို တဲ. သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် ပါ တဲ. ပုဂံလာ တာ ကို ငယ်ပါ တဲ. ဓမ္မရံ ကြီး စေတီ နာ မှာ အိပ် ပြီး ၁ ရက် ထဲ ဆောင် ရွက် သွား ပါ ကြောင်း…….
မှော်အောင်တာကို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဖမ်းမိတာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ဖမ်းမိတာပါလဲ။
လပြည့်ညမှာ ဗလာဆီယာ အမဲ လေး မျက်လုံးစီးပြီး လိုက်ခိုးတဲ့ ငတက်ပြား တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ်။ နောက်ပြီး ဆင်းရဲသူတွေ ကို လိုက်ဝေ တဲ့ သူခိုးမျိုး ရှိမယ်လို့လည်း မယုံကြည်ဘူး။
တကိုယ်တော် သူခိုးကို ဘယ့်နှယ် ဖမ်းလိုက်သတုန်း..?
Sorry နေ ပြည် တော် မှာ ရဲဘက်ပြေး အ နေ နဲ. မိတာ ပါ
အင် းးးးးပစစည်းတွေ ပြန်ရပေါ့မလားး